I-Comfy Cabana Tropical Caye Caulker - I-Airbnb
I-Comfy Cabana Tropical Caye Caulker
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguTropical Dreams
Le cabana yindawo ephangaleleyo yeGold Standard Certified 2 bedroom 2 bath cabana. Njengendlu encinci enefenitshala, inayo yonke into oyifunayo. Ikofu, ifriji, i-microwave, i-air conditioning kumagumbi okulala kunye nedama elihle lokukhaba emva kosuku olude lokuzonwabisa.
Igumbi lokulala elihle kwaye likhululekile, i-cabana ezimbini zokuhlambela ezinekhitshi eligcweleyo, umabonakude wentambo kunye ne-WIFI. Le cabana ibekwe kumgama wokuhamba kuyo yonke into efumaneka kwesi siqithi. Iibhloko ezi-2 ezisuka kuLwandle lweCaribbean, kunye neebhloko ezikude kwiivenkile zegrosari, iindawo zokutyela ezininzi ezintle, kunye nendawo yokuqubha edumileyo, iSplit.
Igumbi lokulala ngalinye linendawo yalo yokuhlambela yabucala, eneshawa entle yamatye.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngumenzi wekofu, imicrowave, isitovu, ifriji, kunye nezinye izinto ezenza le ndawo ivakale njengekhaya lakho elitshisayo.
Singakunceda ulungiselele i-snorkel yakho, ukuntywila okanye uhambo lokuloba, okanye ubambe nje iilobster ezimbalwa kumlobi wasekhaya kwaye uzipheke kwigrill oyinikiweyo.
Ukude nemizuzu nje embalwa ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, okanye kwisikhululo seeteksi zamanzi kwaye usazise nje, sinokuba nomntu wethu onobubele kwinqwelo yegalufa yeteksi ukuba akulande akufumane uzinze.
Yenza le ndawo kunye neCaye Caulker ibe yimfuneko ngexesha lotyelelo lwakho eBelize.
Sikwabonelela ngekhaya elithandekayo kumhlaba omkhulu, kwaye ukuba ubhukisha zombini iintsuku ezili-10 okanye ngaphezulu sinokukunika isaphulelo se-10%. Jonga ikhaya elingasemanzini e-ladyville kwa-Airbnb kwaye ubhukishe iholide emnandi kwilizwe elikhulu nakwi-caye. Unokufumana okugqibeleleyo kangakanani.
4.75 out of 5 stars from 210 reviews
4.75 · Izimvo eziyi-210
Yonke into ekwisiqithi ikumgama wokuhamba. Kukho iivenkile zokutya kunye neendawo zokutyela ezikude.
Umbuki zindwendwe ngu- Tropical Dreams
Hi, we are Chip and Laura. As you can tell by our various homes and properties all over, we love traveling and hosting! We realize that the home is a very important part in havin…
Sinomphathi wepropathi kwisiqithi kwaye siyi-imeyile nje kude. Igama lakhe nguCelvin kwaye siza kukunika iinkcukacha zakhe zoqhagamshelwano xa ubhukisha